စက်တင်ဘာထာဝရ: ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် = ရှေ့နေတွေအများကြီးလိုပါတယ်။.
ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် = ရှေ့နေတွေအများကြီးလိုပါတယ်။.
ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် = ရှေ့နေတွေအများကြီးလိုပါတယ်။ အထူးသဖြင့်ငယ်ငယ်ရွယ်ရွယ်ရှေ့နေတွေပေါ့။ ငယ်ငယ်ရွယ်ရွယ်ဆိုတာပြေးနိုင်လွှားနိုင်လို့ပါ။ပြေးနိုင်လွှားနိုင်ဆိုတာဟိုလိုပြေးရလွှားရတာမျိုးပြောတာမဟုတ်ဘူး (ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်နှင့်ပရိသတ်များ၏ရယ်သံများပြိုင်တူထွက်ပေါ်လာသည်)။ တခါတလေ နယ်ကို လွှတ်ရတယ် ရန်ကုန်ထက်ဝေးတဲ့နေရာတွေကို လွှတ်ရတယ်။ အဲဒီလိုဆိုတော့ ပေါ့ပေါ့ပါးပါးနဲ့သွားနိုင် လာနိုင် ကျန်းမာရေးကောင်းတဲ့လူငယ်တွေကို ကျွန်မတို့ အလိုရှိပါတယ်။
အဲဒါကြောင့်မို့ဥပဒေပညာရှင်လူငယ်တွေကလည်းကျွန်မတို့ရဲ့ဥပဒေအထောက်အကူအဖွဲ့နဲ့ဆက်သွယ်ပါ။ ဘယ်လိုကူညီရမလဲဆိုတာ ပြောရင်းနဲ့ဘယ်လိုအကူအညီလိုချင်တယ်ဆိုတာလည်းပြောပါ။ အဲဒီမှာ ဥပဒေနဲ့ပတ်သက်ပြီး ပိုပြီးတော့ သိချင်တာတွေရှိတယ်၊ ပညာလိုချင်တယ်ဆိုရင်၊ ခုနက ပညာကိစ္စနဲ့ဆက်သွယ်သွားတာပေါ့။ ပညာရေးကိစ္စ ဆိုတော့။ အဲဒီမှာ ကျွန်မနားထောင်နေတာ တခုတော့ ကျွန်မ တော်တော်ကျေနပ်မိတယ်။ ဒီလိုပညာရေးနဲ့ ပတ်သက်လို့ အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်က တော်တော်ကြာ လုပ်ခဲ့တာတွေ ရှိပါတယ်။ လုပ်လည်းလုပ် နေပါတယ်။ ကျွန်မတို့အဖွဲ့ လုပ်နိုင်တဲ့အတိုင်းအတာနည်းလို့ သာ အများမသိကြတာပါ။ ပညာရေးအားနည်းနေတဲ့အချိန်မှာ ကျွန်မတို့ကိုယ်တိုငကျောင်းတွေမထောင်နိုင်တဲ့နေရာမှာ ပံ့ပိုးနိုင်တဲ့နေရာ၊ အရေးကြီးတဲ့နေရာနှစ်ခုကတော့ အင်္ဂလိပ်ဘာသာစကားနဲ့ကွန်ပျူတာပညာပဲ။ အဲလိုကျွန်မထင်မိပါတယ်။
အခုခေတ် မှာဆိုလို့ရှိရင်အင်္ဂလိပ်ဘာသာစကားတတ်လို့ရှိရင် အလုပ်အကိုင်အတွက်လည်း လွယ်ကူတယ်။စာအုပ် ကောင်းတွေဖတ်ဖို့လည်း အထောက်အကူဖြစ်ပါတယ်။ ကွန်ပျူတာပညာဆိုတာကတော့ ကျွန်မရှင်းပြဖို့ မလိုပါဘူး။ ကျွန်မတို့လည်း ကျွန်မတို့ရဲ့လူငယ်တွေကိုအင်္ဂလိပ်ဘာသာစကားနဲ့ကွန်ပျူတာ ပညာသင်ဖို့ ဟာ တတ်နိုင်သမျှ သင်တန်းတွေလုပ်ပြီးတော့၊ သင်တန်းတွေကိုပို့ပြီးတော့ကြိုးစားလုပ်ဆောင်ခဲ့ပါတယ်။ ဒီဟာတွေကို စိတ်ဝင်စားတဲ့လူငယ်တွေအတွက်လည်း ထပ်ပြီးတော့ တိုးချဲ့လုပ်နိုင်ဖို့ ကျွန်မတို့ကြိုးစားပါ့ မယ်။ အဲဒီအထဲမှာ ပညာပေးအစီအစဉ်ဆိုတာလည်းပါပါတယ်။ ပညာပေးအစီအစဉ်မှာဆိုရင် နိုင်ငံရေးကိစ္စ တွေနဲ့ပတ်သက်လို့၊စီးပွားရေးကိစ္စတွေ၊ လူမှုရေးကိစ္စတွေ၊ ဥပဒေရေးရာကိစ္စတွေနဲ့ပတ်သက်လို့ ကျွန်မတို့ရဲ့ အဖွဲ့ချုပ်ဝင်တွေသာမက အဖွဲ့ချုပ်အပြင်က အသိပညာရှင်၊ အတတ်ပညာရှင်တွေကိုပါ ဖိတ် ခေါ်ပြီး သင်တန်းတွေ၊ ဟောပြောပွဲတွေကျွန်မတို့လုပ်ပါ တယ်။ ဒီဟာတွေ အရင်တုန်းကလည်းလုပ်တယ်၊ အခုလည်းဆက်ပြီးတော့ လုပ်ပါ့မယ်။ အဲဒီလိုလုပ်တဲ့အခါမှာ စိတ်ဝင်စားတဲ့ NLDပြင်ပက လူငယ်တွေ လာရောက်နိုင်အောင်လို့ ကျွန်မတို့စီစဉ်ပါ့မယ်။နောက်ဆုံးကျတော့ ဆက်သွယ်ရေးပေါ့။ ဆက်သွယ်ရေး လမ်းကြောင်းကြီးကိုဖွင့်ထားမယ်ဆိုလို့ရှိရင် ဒီလိုကျွန်မတို့ရဲ့ပညာပေးအစီအစဉ်မှာစိတ်ဝင်စားတဲ့လူငယ် တွေပါဝင်နိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်။ အဲဒါကတော့ အရင်ကတည်းကလည်းလုပ်ခဲ့တဲ့ကိစ္စလေ။ အခုလည်းလုပ်နေ ဆဲ။ နောင်လည်းဆက်ပြီးတော့လုပ်သွားပါ့မယ်။ ခုနကပြောတဲ့အထဲမှာ စီးပွားရေးပေါ့နော်။ စီးပွားရေးဆို တာအသက်မွေးဝမ်းကြောင်းပညာပေါ့။ အဲဒါကလည်း အားလုံးဆက်နွယ်နေပါတယ်။
ကျွန်မတခုတော့ သတိထားမိတယ်။ လူငယ်တွေကသိပ်ပြီးတော့အလုပ်အကိုင်အကြောင်းတော့ သိပ်ပြီးမပြောကြဘူး။
အလုပ်အကိုင်မရရှိနိုင်တဲ့အခြေအနေကိုပဲပြောတယ်။ ဒါကိုလည်းကျွန်မသဘောကျတယ်။ ဘာဖြစ်လို့ လဲဆိုတော့ တကယ့်အရင်းခံပြသနာကိုကြည့်တယ်ဆိုတဲ့သဘောပေါ့။ ကျွန်တော်တို့မှာ အလုပ်အကိုင်မရှိပါဘူးလို့ပြောတာထက် အလုပ်အကိုင်တွေမရနိုင်ဘူး၊ ရတဲ့ ပညာတွေနဲ့သင့်တော်တဲ့အလုပ်တွေရှာလို့ မရဘူးဆိုပြီးပြောသွားတာဟာ အဓိကပြသနာကို
မြင်တတ်တဲ့ စိတ်ဓာတ်ကို ဖော်ပြတယ်ဆိုတာမြင်လို့ ကျွန်မအင်မတန်မှအားတက်ပါတယ်။ အဲဒီတော့ ဒီလိုအလုပ်အကိုင်တွေရရှိဖို့ဆိုတာ ပညာတင်မဟုတ်ဘူး၊အခြေအနေကလည်းရှိရမယ်။ ဒီကိစ္စကိုလည်း ကျွန်မ မကြာခဏပြောရပါတယ်။ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ အရင်တစ်ခါ အထိန်းသိမ်းမခံရခင် ခုနစ်၊ရှစ်နှစ်လောက်ကတည်းက ကမ္ဘာ့ကုလသမဂ္ဂ အသိုင်းအ၀ိုင်းမှာ ရေပန်းစားလာတဲ့အဆိုတခုရှိတယ်။
လူတွေကို ငါးပေးမယ့်အစား ငါးမြှားဖို့သင်ပေးရမယ်။အဲဒီတော့ ကိုယ့်ဟာကိုယ် လုပ်စားနိုင်အောင် ပညာပေးရမယ်။ အဲဒီဆောင်ပုဒ်လေးကတော်တော်ကျယ်ကျယ်ပြန့် ပြန့် အသုံးကျတယ်ပေါ့နော်။ ကျွန်မကအဲဒါကိုဖြည့်ဆည်းပြီးတော့ ပြောပါတယ်။ ငါးဖမ်းဖို့သင်ပေးရုံတင် မကဘူးငါးဖမ်းနိုင်တဲ့အခြေအနေလည်း ပေးရမယ်။ ဖန်တီးပေးရမယ်။ ကျွန်မကတော့ ရိုးရိုးပဲပြောတာပေါ့ နော်။ ငါးဖမ်းဖို့သင်ပေးပြီးတော့ ရေလုံးလုံးမရှိတဲ့ တောင်ထိပ်ပေါ်မှာ သွားပြီး တင်ထားလည်း အလကားပဲ။ အဲဒီတော့ ငါးဖမ်းနိုင်ဖို့ အခြေအနေကို ဖန်တီးပေးရမယ်ဆိုတာ ဘာနဲ့ဆက်နွယ်သွားလဲဆိုတော့ လူမှုရေး၊နိုင်ငံရေးအခြေအနေတွေနဲ့ဆက်နွယ် သွားတယ်။ လူမှုရေး၊ နိုင်ငံရေးနဲ့ပတ်သက်လို့ကျွန်မတို့ရဲ့ လူငယ် တော်တော်များများက လူမှုရေးလုပ်ငန်းတွေကို စိတ်ဝင်စားတယ်ဆိုတာသိရတယ်။ လူမှုရေးလုပ်ငန်းတွေကိုစိတ်ဝင်စားတဲ့အခြေခံအကြောင်းကတော့ နှစ်မျိုးရှိတယ်လို့ ကျွန်မမြင်မိတယ်။တစ်ခုကတော့ လိုအပ်နေ လို့။ ကိုယ့်ကိုယ်ကိုယ်ပဲ ကူရတော့မယ်။ကိုယ့်ဘာသာကိုယ်လုပ်မှဖြစ်တော့ မယ်ဆိုတဲ့အသိစိတ်ဓာတ်နဲ့ လူမှုရေးလုပ်ငန်းတွေမှာ ၀င်ပါတာပဲလို့ ကျွန်မမြင်တယ်။ ဒုတိယကိစ္စကတော့နိုင်ငံရေးလုပ်ရင် ထောင်ထဲ ရောက်မယ်၊ လူမှုရေးလုပ်ရင်တော့သိပ်မဆိုးဘူးဆိုပြီး အဲဒီအမြင်လေးနဲ့ လူမှုရေးလုပ်တဲ့အပိုင်းလည်းရှိတယ်လို့ ကျွန်မထင်ပါတယ်။ အဲဒီတော့ ကျွန်မတို့ နိုင်ငံရေးလုပ်တဲ့အခါမှာလေထောင်ကျချင်လို့ လုပ်တာ မဟုတ်ဘူး။ အထိန်းသိမ်းခံချင်လို့ လုပ်တာမဟုတ်ဘူး။မလုပ်သင့်၊ လုပ်သင့်ဆိုတာခွဲခြားပြီးတော့ လုပ်သင့် လို့ လုပ်တဲ့အခါမှာကျရင်လည်း မရှောင်နိုင်တဲ့ အနေအထားမျိုးဖြစ်ပါတယ်။ ဘယ်သူကမှတော့ ထောင်လည်းမကျချင်ဘူး၊ အထိန်းသိမ်းလည်းမခံချင်ဘူး။ ကျွန်မတို့က ထောင်မကျမှ ကိစ္စတခုကို လုပ်မယ်ဆိုပြီး တော့ အဲလိုစိတ်ဆုံးဖြတ်ထားလို့တော့ မရဘူးလို့ထင်တယ်။ စောစောကဆိုလို့ရှိရင် အမျိုးသားဒီမိုကရေ စီအဖွဲ့ချုပ်ကို
မတရားအသင်းကြေညာလို့ရှိရင် ဘယ်လိုလုပ်မလဲဆိုပြီးတော့မေးခွန်းတခုမေးပါတယ်။ ဖမ်းလား၊ ဆီးလား၊ အဖွဲ့ချုပ်ဝင်တွေအမျိုးမျိုးအနှောင့်အယှက်ပေးလား လုပ်လာရင် ဘယ်လိုလုပ်မလဲ မေးပါတယ်။ဥပဒေအရ ကျွန်မတို့ရဲ့ မတရားအသင်းရယ်လို့ ကြေညာလို့မရပါဘူး။မှတ်ပုံတင်မပေးတာ သက်သက်ပဲ။ မှတ်ပုံမတင်ထားတဲ့အသင်းလို့ ပြောရင်တော့ ရနိုင်တယ်။ မတရားအသင်းကြေညာခံရ အောင်လို့ ကျွန်မတို့ က ဘယ်ဥပဒေကိုမှမဖောက်ခဲ့ပါဘူး။ ဖမ်းလား၊ ဆီးလားဆိုတာကတော့ တရားဝင် အသင်းအနေနဲ့တောင်ဖမ်းဆီးခံနေရတာပဲ။ သိပ်တော့လည်း ထူးမှာမဟုတ်ပါဘူးလို့ ကျွန်မပြောချင်တယ်။ ကျွန်မတို့လည်း တော်တော်တော့ အတွေ့အကြုံရနေပါပြီ။ ဒါပေမဲ့လည်း အဖမ်းအဆီးမခံချင်ပါဘူး။ အလုပ်မဖြစ်လို့။